पार्टी फुटको संघारमा प्रदिप नेपालको रामवाण कस्तो होला ? - समय-समाचार
पार्टी फुटको संघारमा प्रदिप नेपालको रामवाण कस्तो होला ?
२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:४५
काठमाडाैं, कात्तिक २१ । सरकारले गरेका अधिकम्स निर्णय विवादित मात्र बनेका छैनन् पटक पटक न्यायालयले समेत जवाफमाग गरेको छ । जनता कोरोना महामारीमा रहेका समयमा भएका कतिपय निर्णय शत्ता शक्तिका लागि प्रतिउत्पादक बनेका समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा पटक पटक फुटको संघारमा पुग्दै पुन व्युतदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाभित्रको अध्यक्षद्धय विचको नेतृत्वका विवादका कारण सिङ्गो पार्टी पङ्क्ती नै दिशाहिन वनेको नेकपाकै नेताहरु वताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको मुख्य मन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको , भारतिय गुप्तचर निकाय रअका प्रमखु भेटघाट गरेको , जथभावी राजदुत नियुक्ती गरेको र मन्त्रीपरिषद हेरफेर गरेको लगायतका विषयलाई लिएर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेता नेपाल पक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट वन्दै आएको छ । प्रचण्ड माधव पक्षले पार्टीको निर्णयनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने तथा पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकिकरण हुँदाको वखतमा आलोपालो सरकार सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् ।
तर ओलीले कुनै पनि हालतमा आफुले राजिनामा नदिने बरु प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुपरेमा जस्तोसुकै निर्णय गर्ने वताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वाच्छारी ढङ्गमा चलेको आरोप नेकपाभित्रै नेताहरु वताउँछन् । ओलीको कार्यसैलीका कारण पछिल्लो समय माधव प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिएका छन् । ओलीलाई पटक पटक सरकारबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्दै तर्साएपनि उनीहरुसंग ओलीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कडि भने अहिलेसम्म भेटेका छैनन् यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड माधवसँग वहुमत भएपनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप उनीहरुकै अनुयायीले गर्दै आएका छन् । माधव खेमाकी युवा नेता तथ आफुलाई प्रखर वक्ताका रुपमा स्थापित गरेकि नेकपा नेतृ रामकुमारी झाक्रीले प्रचण्ड- माधव एक ठाउँमा हुदाँ बहुमत हुने भएपनि त्यसको प्रयोग गर्न नखोजेको भन्दै आक्रोस पोखेकी हुन्
वुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा आफुले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान दोर्याए । उनले उक्त कार्यक्रममा आफुले प्रधानमन्त्री छोडे मुलुक दर्घटनामा पर्ने संज्ञा दिएका छन् । जस्तो सुकै राम्रो काम गरेपनि सरकारलाई गाली गर्ने एडिक्सन रहेको वताएका थिए । तर झाक्रिले यो विषयमा सहमत छैनन् उनले मनोमानी ढङ्गवाट चल्ने प्रधानमन्त्रीमा नै एडिक्सन भएको वताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट अन्य समहुमात्र हैन उनकै समुहका नेता कार्यकर्ता समेत आजित बनेका छन् । कोभिडका समयमा जनताको जीवनरक्षा भन्दा पनि पार्टीभित्रको गुटउपगुट र सत्ता केन्द्रित राजनीति उचित नभएको तर्क उनीहरुको छ । यसरी गुट व्यवस्थापन ढुंगाको चामल जस्तै भएका वेला पार्टि फुटको समेत चर्चा चुलिने गरेको छ ।
दुई अध्यक्षविचको आपसी लेनदेन नमिल्दा नेकपा पटकपटक फुटको नजिक पुगेको भन्ने तर्कहरु हुने गरेका छन् । पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरुले पुराना नेता प्रदिप नेपाललाई झगडा मिलाइदिन गुहार गरिरहेका छन् । प्रदिप नेपालले पनि ओली माधव दुबैको सिद्धान्त जवज भएकाले मिल्नलाई आग्रह गरेका कुराहरु वाहिर आएका छन् । तर यता पुर्व मओवादीमा रामवहादुर थापा वादल गुट , लेखराज भट्ट , हरिवोल गजुरेल लगायतक नेताहरुले नै प्रचण्डलाई साथ नदिएको देखिन्छ